Waxaan soo kaban karto, Faylal ay ka SD Card khilaafo?
Kabsado Xogta laga SD Card kharribmay oo 3 Talaabooyinka
1 Waxaan soo kaban karto, Faylal ay ka SD Card khilaafo?
Hi, kaarka aan SD on my phone taas oo ka kooban sawiro fasax badan oo hadda ka shaqeeya joojiyay. Kaarku waa maran aan telefoonka, waxaana u sheegay in ay qaab. Laakiin hadda waxaan waxba kama qaban karto. Waan ogahay kaarka kharribmay oo aan u baahan inay ka soo kabsadaan xogta ka. Ma haysaa fikrad kasta oo wanaagsan ama soo jeedin? Thanks.
Waxaa jira sababo badan oo aad musuqmaasuqa card, sida baadi nidaamka, jeermiska fayraska ama xitaa dhaawac card. Waa wax aan macquul aheyn inuu ka soo kabsado xogta ka card SD kharribeen haddii kaadhkaaga la jidh ahaan burburay. Laakiin kharribeen SD kabashada xogta card weli suurtagal tahay haddii aad kaarka SD kharribeen waxaa laga garan karaa computer iyo xogta aan overwritten.
Waxaa jira barnaamijyo badan oo ku kharribeen card SD kabashada xogta ee internetka. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa doorashada ugu fiican ee aad ka bogsato xogta ka card SD u kharribmay. Muuqaalada kabashada xoog badan iyo ammaan ay awood aad ka bogsato oo dhan files lumay ka card SD kharribeen, oo ay ku jiraan videos, sawiro, files audio, document files, iwm Waxaa ka dhigaysa kabashada xogta card SD kharribeen fudayd ah.
Waxaad kala soo bixi kartaa version jirrabaadda kuwa aan Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado files ka card SD kharribeen hadda!
2 ka SD Card kharribeen Ladnaansho Data in 3 Talaabooyinka
Ka hor inta aynaan bilaabin, waxaad u baahan tahay si aad u hubiso card SD kharribeen, inkastoo joogsato shaqeeya, weli waxaa laga garan karaa sida drive ah by computer safar. Haddaba aan ka bilowno dib u soo kabashada la Windows version of barnaamijka, taas oo uu leeyahay hawlaha ka shaqeeya la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan xogta soo kabashada card SD kharribeen
Connect card SD aad la your computer iyo bandhigista Wondershare Data Recovery, aad arki doonaa bilowga ah Windows sida image hoos ku qoran.
Waxaad ka akhrisan kartaa tilmaamaha of 3 hababka soo kabashada bixiyo furmo. Si aad u soo kabsado xogta ka card SD kharribeen, aynu dooro "lumay Recovery File" mode si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 baarista card SD kharribeen
Markaas kaarka SD kharribeen la ogaan doonaa oo soo bandhigay. Waxaad u dooran kartaa in uu furmo oo guji "Start" in iskaanka for files laga badiyay waxaa ku.
"Enable Deep Scan" waa fursad si aad u soo kabsado xogta ka kaarka SD formatted.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka card SD kharribeen
Dhammaan files soo kabsaday ku qoran kaarka SD kharribeen la soo bandhigi doonaa "Jidka" iyo "File Type" qaybood uu furmo suuqa ka dib markii iskaanka.
Waxaad ka arki kartaa magacyada file ama images Falanqeynta / waraaqaha si aad u hubiso sida badan oo files badiyay lagu soo kabsaday karaa kaarka SD u kharribmay.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad calaamadeyso files aad ku socoto inuu ka soo kabsado card SD u kharribmay oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u soo celin your computer badbaadiyo.
Lexar JumpDrive Recovery: Ladnaansho Lexar JumpDrive File fudayd
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga SD Card kharribeen